Maungtintyin: ယုံကြည်စိတ်ချမှုသည် သင့်ရဲ့တတိယမြောက်မျက်လုံး ဖြစ်သည်
ယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာ စိတ်အတွင်းရှိ မျက်လုံးတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပဘက်ရှိ ပကတိမျက်စိနှစ်လုံးလို ကမ္ဘာလောကဓာတ်ကို ကြည့်ရှု့နိုင် မြင်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အတွင်းမှာ သူ့ရဲ့နာမည်က ယုံကြည်စိတ်ချမှုလို့ခေါ်တဲ့ တတိယမြောက် မျက်လုံးတစ်လုံး ရှိပါတယ်။ ဒီယုံကြည်စိတ်ချမှုမျက်လုံးဖြင့် နတ်ကဲ့သို့သော အရာကို မြင်ရပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုမျက်လုံးဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျက်လုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကသာ သိနားလည်နိုင်တဲ့ အချို့အရာများ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေကို သိရှိဖို့ အခြားနည်းလမ်း မရှိပါ။
သင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်လျင် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ရှု့မြင်မိမှာမဟုတ်တဲ့ အချို့အရာများကို သူထံမှာ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်က မမြင်နိုင်တဲ့ ချိုမြမှုတစ်ခုကို အဲဒီသူ့ထံမှာ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီချိုမြမှုဟာ နုးညံ့သိမ့်မွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအရာအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ထိတွေ့မှုကိုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှသာ နုးညံ့သိမ့်မွေ့တဲ့ ချိုမြမှုကို လှစ်ဟပြပါတယ်။ အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်က ကြားသိနားထောင်မိမှာမဟုတ်တဲ့ သီဆိုကျူးရင့်မှု တစ်ခုရဲ့ ပဲ့တင်ထပ်လာတဲ့ ရိုက်ခတ်သံကို အဲဒီသူထံမှာ သင်ဟာ ကြားသိရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ကြားသိနားထောင်ဖို့ အခြား ဘယ်သူမဆို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ နီးနီးကပ်ကပ် လားရောက်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ကသာ အဲဒါကို ပိတ်ပင်ထားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းက အလှအပဟာ သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်တဲ့ သူထံမှာ သိသာပေါ်လွင်လာဖို့ စတင်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချစ်တဲ့သူဟာ စတင်လှပလာပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့ကြီးကျယ်ခန်းနားခြင်းအားလုံး - ဘ၀ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအားလုံးကို သူထံမှာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒါက သင်ဟာ အဲဒါကို စိတ်ကူးနေတာ မဟုတ်ပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်လုံးကို ဖွင့်လျင်ဖွင့်ချင်း ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မမြင်နိုင်တာတွေက မြင်နိုင်ဖို့ သင့်အတွက် စတင်ပါတယ်။ မလေ့လာမိတဲ့ သတိမမူမိတာတွေက သတိမူမိဖို့ သင့်အတွက် စတင်ပါတယ်။ ပုန်းကွယ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့ တည်ရှိနေတာကို တွေ့ကြုံခံစားဖို့ စတင်ပါတယ်။
“Finding upon waking the doors yet bolted, who knows by which door he enters and leaves.”
ဒါက Bihariမှ တကယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်မှ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်မြတ်နိုးသူသက်လျာက တံခါးမအားလုံးနဲ့ အခန်းရဲ့ ပြတင်းပေါက်များကို မင်းတုပ်ချပြီးတဲ့နောက် အိပ်ပျော်နေပါတယ်။ သူမရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာ သူမရဲ့ချစ်သူက သူမထံသို့ အလည်ခရီးလာပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမဟာ အိပ်ရာမှနိုးထပြီးတဲ့နောက် သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာတကျ မင်းတုပ်ချထားတဲ့ တံခါးများကို ပိတ်ထားဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လိုဝင်လာသလဲဆိုတာ- ပြီးတော့ ဘယ်လမ်းကြောင်းက ထွက်ခွါသွားသလဲဆိုတာ- ဘယ်သူက သိရှိပါသလဲ?
“သင်ဟာ ဘယ်လမ်းကနေ ၀င်လာပါသလဲ? ဘယ်လမ်းကနေ ထွက်ခွါသွားပါသလဲ? ဘယ်ပြတင်းပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်ပါသလဲ ?” အဲဒီပြတင်းပေါက်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ယုတ္တိဗေဒနဲ့ နေထိုင်နေတဲ့သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာထက် တစ်စုံတစ်ရာခြေခြေမြစ်မြစ်ကို နက်နက်နဲနဲ သူမသိပါ။ သူ့ရဲ့ဘ၀ဟာ လေးနက်မှုမရှိ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ ငွေများစွာကို ကောင်းစွာ စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးကို သူသေဆုံးတဲ့အခါ အဲဒီမှာ တည်ရှိလျက် ချန်ရစ်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ ကမ္မဌာန်းတရားကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် သင်နှင့်အတူပါရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့အရာကတော့ ကမ္မဌာန်းတရားသာလျင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ ဒီလိုလူတစ်ယောက်က နောက်ဆုံးအန္တိမချမ်းသာမှုကို ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အတွင်းသန္တာန်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျက်လုံးရှိတဲ့သူကသာလျင် နောက်ဆုံးအန္တိမဓနဥစ္စာကို ရရှိပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာမှာတော့ အထွတ်အထိပ် နိဂုံးရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာ ယခုအထိ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးမဟုတ်တဲ့အရာက ဖြစ်ပျက်လိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာလည်းပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာလောကဓာတ်မှာ ဤကဲ့သို့သော အလှအပရှိပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သော အလင်းရောင်- ဤကဲ့သို့သော တေးသွား- ရှိပါတယ်။ ငှက်အသီးသီးရဲ့လည်ချောင်းမှာ သီဆိုကျူးရင့်သံဖြင့် ပြည့်နေပါတယ်။ သစ်ရွက်အသီးသီးမှာ အလှအပ၊ ကြယ်အသီးသီးမှာ အလင်းရောင်ရှိပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာလောကဓာတ်ဟာ ခမ်းနားမှုနဲ့ အလွန်ပြည့်စုံပါတယ်။ အဲဒီရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စွမ်းအင်များ ဒါမှမဟုတ် အခြားအရာများ ရှိရပါလိမ့်မယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတာ ဒီအရောင်အသွေးအားလုံးကို ဖန်တီးနေတဲ့ အချို့စွမ်းအင်များ ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတာ အလှအပများစွာကို ကြဲချတဲ့နေရာ- ဤကဲ့သို့သော အလှအပများရဲ့ရင်းမြစ်များကိုလည်း တွေ့ရှိရမည် တည်ရှိရမည်ဆိုတာနှင့်ပတ်သက်လို့ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတာ ဒီသိမ်မွေ့နက်နဲ့တဲ့ ချောမွေ့နုးညံ့တဲ့ အရိပ်အမြွက်လက္ခဏာများကို သင် ရယူလက်ခံတဲ့ ရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ ဘ၀ဖြစ်တည်မှုအပေါ် ကြည်ဖြူစွာလက်သင့်ခံခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, February 10, 2011